Glion & Les Roches Seminar in Yangon Myanmar - Ekthana
🇨🇭🇬🇧 Study BBA, PGD, MSC, MBA in Hospitality in Switzerland and UK🇨🇭🇬🇧
💡အနာဂတ်တွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည့် Hospitality & Tourism လမ်းကြောင်း ကို စတင် လျှောက်လှမ်း ချင်သူများ သင့်အနာဂတ် ပိုမိုလှပနိုင်စေရန် Hospitality ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များမှ BBA, MSC, MBA ဘွဲ့များကို ဆွစ်ဇလန်နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ရှိ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်စာရင်းဝင် ကျောင်းများမှာ တက်ရောက် လေ့လာသင်ယူ ဆည်းပူးကာ ဆွတ်ခူး ရယူလိုပါသလား?
👩🏻‍💼ယခုအခါ ကျောင်းသားများ ကို မိတ်ဆက် ပေးလိုတာကတော့ Hospitality industry မှာဆိုရင် Switzerland နဲ့ United Kingdom ဆွစ်ဇလန်နှင့်အင်္ဂလန် နိုင်ငံ တို့မှာတည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်စာရင်းဝင် ကျောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ Glion Institute of Higher Education နဲ့Les Roches Global Hospitality Education တို့ မှာ လေ့လာသင်ယူဆည်းပူးကာ BBA, MSC, MBA ဘွဲ့များကို ဆွတ်ခူး ရယူလိုက်ပါလို့အကြံညဏ်ကောင်းလေးများပေးလိုက် ပါရစေ!
👨🏻‍💼ထိုကျောင်းများတွင်တက်ရောက်ပညာသင်ယူဆည်းပူးကာ ဘွဲ့များကိုဆွတ်ခူးရယူခဲ့ဲ့သောကျောင်းသားကျောင်းသူများစွာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီဟိုတယ်ကြီးများနှင့် ကုမ္ပဏီကြီးများ၏လုပ်ငန်းခွင်များတွင်အမှန်တစ်ကယ်ပင် လုပ်ငန်းဝင်ရောက် နေသောသူများဖြစ်ပြီး ,
ထိုကျောင်းများတွင်တက်ရောက်ပညာသင်ယူဆည်းပူး ခဲ့ဲ့သော သူများနှင့် မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများအသေးစိတ် ဆွေးနွေး နိုင်ရန်စီစဉ်ပေး ထားကြောင်းကိုသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ!
သင့်ထံသို့ရောက်ရှိ လာသောအခွင့်အရေး ကိုလက်မလွတ်ရလေအောင် မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများအသေးစိတ် ဆွေးနွေးခွင့် ကို ယခုပင် စာရင်းသွင်း ထားလိုက်ကြအောင်နော်။
No.2 Hospitality School for Employer Reputation (2018)
Top3The best Hospitality Institute in Switzerland (2018)
No.3 Hospitality & Leisure Management. (2019)
📲မိဘများနှင့်ကျောင်းသားများအသေးစိတ် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အစီစဉ်
စာရင်းသွင်း ရန် : https://forms.gle/2xbDuj3TR1VyEaK9A
Date: 15 June 2019 | 1-4 PM
Venue: The Strand Yangon
📞More information – www.ekthana.com
☎ Office Phone: +95 1 525720, Mobile:+959790190999 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Office address: 74-D Inya road. Kamayut Township. Postal code 11041. Yangon, Myanmar.
Glion & Les Roches Seminar in Yangon Myanmar
+959790190999